Bakhaylkii is Ciilkaambiyay? - iftineducation.com
Bakhaylkii is Ciilkaambiyay?
Beri baa waxa la yidhi, nin reer u soo hoyday. Markaasaa reerkii ka seexday. Subixii markii waagii beryay baa ninkii marida ahaa kacay oo ninkii reerka lahaa u yeedhay. Markaasaa ninkii reerka lahaa qolqolkii isa soo taagay. Markaasaa ninkii martida ahaa ninkii reerka lahaa ee ka seexday ku yidhi:
Haddaan ninyohow taqaan marka soor la iigu yimaaddo sidaan wax uga bixiyo iyo marka la I siiyo intaan ka cuno iyo markaan waayo sidaan u adkaysto, xalay iga maad seexateen!” Intaa markuu ku yidhi baa buu ninkii martida ahaa iska tegey. Markaasuu bakhaylkiina is ciilkaambiyay.
Sheeko Caruureed Dadqalatadii Dhagdheer